Nina Paley iyo Software-ka Bilaashka ah ee Khasaaray ee loogu talagalay animation-ka vektorka Laga soo bilaabo Linux
Anti | | Aplicaciones, Naqshad, Noticias, Kuwa kale
Aagga naqshadeynta garaafka waa qeyb leh waxyaabo badan oo is-khilaafsan oo ku jira nidaamyada GNU / Linux. Halka days awood buuxda u leh inuu kula dagaallamo barnaamijyada milkiileyaasha waaweyni, tifaftirahayaga sawirka madaxa, GIMP, waxaa ka maqan taageerada CMYK. Qaabkani wuxuu si isdaba joog ah isugu soo noqnoqdaa vectors-ka ayaa sidoo kale ka reeban Inkscape Waa barnaamij si cadaalad ah u horumarsan, oo leh waxqabadyo ka sarreeya dhammaanba. Anigoo adeegsade ah ku celcelin, waxaan dhihi karaa waxay la kulantaa filashadeyda waxayna daboolaysaa baahideyda, oo aan badneyn
Laakiin ma ahi naqshadeeye xirfad yaqaan ah. Iyo inkasta oo ay jiraan tusaalooyin naqshadeeyayaasha oo si gaar ah ugu adeegsada softiweer bilaash ah shaqadooda (sidee Máirín Duffy, Joaclintama Ciise Daa’uud) waa wax caadi ah in la maqlo cabashooyinka ku saabsan horumarin la'aanta shaqooyinka qaarkood. Kiiska maanta na xiisaynaya: animation vector.
Nina paley waa madadaalo, majaajiliiste iyo farshaxan ka shaqeeya oo kobciya dhaqanka xorta ah. Wuxuu ku sii daayay shaqooyinkiisa liisanka 'Creative Commons-Attribution-Share Equal licence', oo ay ku jiraan filim muuqaal muuqaal ah laga soo qaaday 2008: Sita Heesta The Blues. Qoraalkan wuxuu ka cabanayaa la'aanta software bilaash ah oo loogu talagalay tafatirka iyo abuurista animations vector macquul ah mana ahan sabab la'aan dhiirigelinta uu u leeyahay codsigiisa. Waxaad ubaahantahay softiweer aad adeegsan karto kuna kalsoontahay animator ahaan profesional Waa maxay. Wax u oggolaanaya shaqadaada in lagu ilaaliyo waqtiga isla markaana laga fogaado faylasha ilaha Flash-ka ee aan mar dambe ugu adeegin noocyada cusub.
Laakiin marka hore, aan macnaha guud ka dhigno cabashadaada. Hore ayaan taas u xusay Inkscape daboolay baahidayda marmar kartooniste. Qof kasta oo la shaqeeyey wuxuu ogaan doonaa inuu u adeegsado halbeegga SVG. Iyo SVG taageertaa animations. Sidaas ayaan ku xallinay mushkiladdeennii ugu horreysay, maaddaama aan loo baahnayn in loo ikhtiraaco qaab cusub qaybta garaafka ee shaqada. Laakiin Inkscape Ma tafatiri karto animations-ka xitaa hadii ay awoodo, maahan jawiga ku haboon in sidaa la yeelo, waxaa ka maqan qalab muhiim u ah maaraynta waqtiga iyo muuqaalka. Sidoo kale, dadaalka mustaqbalka kooxda Inkscape waxay u badan tahay inay diiradda saaraan taageerada 3D marka loo eego animation.
Paley wuxuu noo sheegayaa maxay yihiin astaamaha tifaftiraha riyadan. Feejignaan gaar ah markay timaado isdhexgalka garaafka:
Flash 8-sida waqtiga
Mawjadaha mowjadaha oo ka muuqda waqtiga
Naxwaha «astaamaha», halkaas oo kuwani lagu noolaan karo laguna nuuxnuuxsan karo
Qalab sawir gacmeed wanaagsan
Fursadaha dhoofinta fiidiyowga ee ballaaran
Ka madax banaan qaraarka
Meelaha diiwaangelinta waalidka-ilmaha
Xuduudaha vector Custom (dhaafsiisan jajab iyo dhibco)
Iyo in yar cayayaanka
Shaqooyinkan badankood waxaa laga heli karaa gudaha days, oo leh tifaftire fiidiyoow abaalmarin ah oo kaligiis ah. Astaamaha qaar ayaa muhiim ah, sida "lafaha", oo u shaqeeya si la mid ah days, waxay ku dhawaaqi lahaayeen dabeecad waxayna noo oggolaan lahaayeen inaan soo bandhigno. Si kasta oo ay dood u tahay weedhuna Anigu waxaan ahay pragmatist oo ma ahan purists Marka ay timaado taageerada Mac ee dukumiintiga asalka ah, waxaan marwalba halis ugu jirnaa inaan weyddiino barnaamijyada iskutallaabta, oo ku dhammaada caawinta qaadashada nidaamka sida GNU / Linux. Aniga qudhaydu waxaan kaqeyb galay hadal days (Waxaan ku qaadan karnaa maalinta oo dhan inaan tixraac ka bixinno isaga, laakiin xaaladdiisa maamul ahaan animation-ka waa mid aan la dafiri karin) halka ay ka hadlayaan Mac-da. Meel kasta oo ay u ordaan, weli waa software bilaash ah.
Ka dibna wuxuu ku tuurayaa bamkii. Mashruuca noocan ah ayaa loo baahday, sida ay sheegtay, milyan doolar. 1 milyan oo doollarka Mareykanka ah, in kasta oo uu sheeganayo inuu deggan yahay boqol kun. Suurtagal ma tahay mashruuc noocan oo kale ah in lagu soo uruuriyo tirooyinkan Kickstarter? Isaga maalgelin badan ma kufilan doontaa? Halkee laga bilaabaa? Miyaan haddaba tan u baahan nahay? Kuwani waa su'aalaha aan rabo inaan maanta weydiiyo, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay muujinayaan jilicsanaanta software-ka bilaashka ah ee silsiladaha.
Waxaan horey u maqalnay in mashaariic gaareyso tirooyin hal milyan ku jira Kickstarter, oo inta badan loogu talagalay qalabka farsamada. Iyada oo leh dhiirigelin sax ah, $ 100,000 uma muuqato sida tiradaas xad dhaafka ah kadib. GNU MediaGoblin wuxuu garaacay 42,000 si deg deg ah; markaa olole aan lahayn waqti cayiman ayaa run ka dhigi kara rajadayada. Qodobka koowaad waa la xaliyay.
Hadduu maalgelin badan waa ku filan tahay arin kale. Ololahani waxay u baahan yihiin inay hadiyado gaarsiiyaan macaamiishooda. Waxaan ka goyn karnaa qadar fiican xoolaha la soo aruuriyay, funaanado, macmacaan iyo waxyaabo kale oo yaryar, oo ay weheliso kharashaadka iskaa u gaarka ah, sida korontada, shaqadooda waan ka tagi karnaa oo waxaan ku hayn karnaa goob mashruuc ka socda halkaas. Taasi waa kharash. Mashruuca softiweer ee bilaashka ahi waa inuu ka guuraa dhismaha jacaylka farshaxanka oo uu bilaabaa inuu ka fikiro qaab ganacsi oo u oggolaanaya inay sabeeyaan. Tababbarku waa waxa maskaxdaada ku soo dhaca. Xusuusnow iibinta softiweerka bilaashka ahi inuu gebi ahaanba waafaqsan yahay mabaadi'da anshaxa ee ka dambeysa. Bar laba nus ayaa la xaliyay. Halkaa markay marayso ayaa fikradaha waaweyni ku dhintaan warqad.
Horeyba waxaa u jirey barnaamij la yiraahdo Synfig Tan awgeed. Oo sida muuqata, ma xalinayso baahiyaha xirfadleyda. In la sameeyo a fargeeto ah Iyada oo saldhig u ah koodhka waa inaysan noqonin wax dhibaato ah, in kasta oo ku deeqa lacagta horumarinta barnaamijkan ay noqon karto ikhtiyaar wanaagsan. Jooji inaad u gudbiso dadaallada noocyo cusub oo ka faa'iideyso wixii aad horey u haysatay. Suurtagal Qodobka seddexaad, sida muuqata waa la xaliyay, in kasta oo aan ku diidi karo maktabadaha garaafyada ee la isticmaalay.
Jawaabtana su’aasha ugu dambaysa waa haa. Miyaan haddaba tan u baahan nahay? Haa. Waxaan ubaahanahay qalab aan marlabaad ku kalsoonaan karno, madal kasta ha noqotee. Animator-ku wuxuu awood u yeelan lahaa inuu guriga ka yimaado maalin dheer oo shaqada ka mid ah wuxuuna fariisan karaa isagoo adeegsanaya isla barnaamijka mashiinkiisa gurigiisa si uu ugu saxo faylal isku nooc ah, xitaa hadii kumbuyuutarkiisa shaqada uu yahay Mac sanadka iyo kumbuyuutarkiisa gaarka ah ee kafee sameeya. ordaya Ubuntu. Ama taa beddelkeeda.
Waxaan u baahanahay inaan aaminno qalabkeena markale sidaan ugu kalsoonahay qalinkeyga. Ku kalsoonow inaadan i khiyaanayn doonin xitaa haddii aad ogtahay inaad fashilmi doontid. Qalinkaygu wuu waayi doonaa dhibicdiisa Inkscape qalad ayaa soo muuqan doona. Laakiin waan ku kalsoonaan karaa in istaroogteyda, vektorka ama garaafka, la awoodi doono in la furo 2, 3 ama 10 sano mustaqbalka, maxaa yeelay waxaa jira halbeeg ka dambeeya, oo la sii xoojiyay isla markaana leh dammaanad qaadka ugu yaraan iga caawinaya inaan ilaaliyo dukumiintiyada hore. Ha noqoto shaqadayda ama hiwaayadayda.
Kaliya maahan abuuritaanka barnaamij si loogu beddelo mid lahaansho, habka maskaxda caadiga ah ee kaligiis gooni ahaanta jasiiradda xorta ah. Sameynta softiweerka sidan oo kale ah wuxuu ku barwaaqoobayaa waxyaabo badan oo beddel ah oo lahaansho ah waana mid weligeed adag Kani waa baddii silsiladihii aan hore uga hadlay, ee hal-abuurnimada iyo tijaabinta oo keliya ay innaga soo jiidi karaan. Iyo kalsoonida.
Halkan waxaan kaaga codsanayaa inaad isweydiiso inaad ku kalsoon tahay qalabkaaga. Taasi waa aniga aniga faa iidada ugu weyn ee barnaamijka bilaashka ah. Inaad markale awooddo inaad aaminto. Maanta waxaa loogu talagalay animation vector iyo berri waxaa loogu talagalay otomatiga xafiiska, naqshad kumbuyuutar lagu caawinayo ama bay'ad desktop ah. Dib u milicsigayagu mustaqbalka wuxuu qaddarin doonaa in dhagaxii ugu horreeyay la dhigay maanta. Aynu dhigno dhagaxa ugu horreeya ee software bilaash ah maanta markaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nina Paley iyo Software-ka Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee animation animation animation
Anigu waxaan ahay Farshaxaniiste muuqaal ah waxaanan ku horumariyay barta internetka iyo qaabeynta tifaftirka qaab xirfadaysan, waxaan adeegsaday softiweer bilaash ah, oo ay kujirto Nidaamka Howlgalku.
Waxaan isku dayay dhowr GNU / Linux OS oo leh Ubuntu Waxaan kala kulmay dhibaatooyin xasilloonida gaar ahaan midnimada, iyadoo la cusbooneysiinayo Debian iyo Fedora, Arch ma ahan saaxiibtinimo dhammaan waxaan ku rakibey dhowr jeer oo keliya xaqiiqaduna waxay tahay inay tahay wax laga xumaado in laga shaqeeyo terminal saafi ah , Eeyaha waa fudeyd laakiin waa gaaban yahay.
Sikastaba, ma awoodin inaan iska daayo Windows-ka, waan jeclaan lahaa, laakiin naqshadeeye ahaan kama takhalusi karo Adobe iyo Corel, codsiyada naqshadeynta Linux wali ma siinayo ballac, dhibaatada Inskape ee CMYK aad ayey u calaamadeysan tahay, runtiina wax walba Marka laga hadlayo maareynta midabka, Gimp wali ma sameeyo HDR, iyo Scribus ma haysto taageero bandhig wanaagsan wali.
Marka la soo koobo, Linux waa soo-jeedin muddo-dheer ah oo xagga naqshadeynta ah, waxaan si gaar ah u maleynayaa in awooddu tahay waxa caawiya GNU / Linux inta badan, laakiin waxay ku sii socotaa dhibaatooyin aad u daran, nidaamyo badan, soo-jeedinno badan iyo kala-qaybsanaan aan muran lahayn.
Waa run. Waxay ila tahay aniga waxtar maleh in lahelo qeybinta diirada saareysa baahi aan lagu xalin karin aaladaha hada jira iyo in ay jiraan laba barnaamij oo kaladuwan oo isku mid ah la qabanaayo kaliya maxaa yeelay waxay leeyihiin agabyo shaashadeed oo kaladuwan.
Waan ogahay inay tahay wax laga xumaado, laakiin dhibaatada aniga i haysata waa kalsoonida aan ku qabno barnaamijyada. Laga soo bilaabo maqalka waxaan ogahay in ka guuritaankii Freehand ilaa Illustrator uu ahaa mid naxdin leh dad badan horumarkuna wuxuu kudhamaaday sababtoo ah wax aan u turjumi karno sida rabitaanka shirkada. Adduunyada barnaamijka bilaashka ah, haddii qof sidaas oo kale sameeyo, arrinta waxaa lagu xalliyaa a fargeeto ah waana tan si ballaaran loo xaqiijiyay.
Arrintu maaha in la soo afjaro kala duwanaanta, laakiin waa in la soo jeediyo xalal guud. Taasi tusaale ahaan menus launcher Unity waxay ka shaqeyn kartaa KDE. Gaaritaanka is afgarad noocaas ah waa rajadeenna adduun kala daadsan.
Ma aqaan sida ay wax u socdaan Gimp iyo Inkscape, laakiin waxaan aad u isticmaalay Blender iyo Maya labadaba, waana la mid yihiin, xitaa Blender waxay leeyihiin heer gaar ah oo ka sarreeya qalab badan iyo bixinta gudaha ama dibedda (sida POVray) waa mid aad u fiican, waa Waxa kaliya ee aan ku dhaleeceyn karo oo ku saabsan Blender waa dhoofinta sawirada vector, labadaba diyaaradaha dxf iyo sawirada fudud ee svg, taas oo aan aheyn kiiska AutoCAD >> Maya (waa maxay sababta?), Laakiin haddii kale, Blender ayaa sifiican loogu habeeyay baahidayda. Sidoo kale (oo la xaqiijiyay) waxqabadka Blender ee ku saabsan qaybinta GNU / Linux ayaa ka wanaagsan Windows.
"Ubuntu waxaan kala kulmay dhibaatooyin xasilloonida gaar ahaan Midnimada"
Miyaad ku dhawaaqday Linux Mint? Guud ahaan way ka xasilloon tahay Ubuntu (in kasta oo 100% ay iswaafaqsan tahay), dhaqso iyo fudeyd badan sidoo kale waxay leedahay kombuyuutarro qaabeysan sida KDE SC (gaar ahaan dadka ka yimid sanadaha Windows), Cinnamon ama Xfce.
"Iyadoo la cusbooneysiinayo Debian iyo Fedora"
Haa, waa run, barnaamijka softiweerka ee tijaabinta Debian guud ahaan waa duugoobay, laakiin Fedora waxaan la yaabanahay dhibaatooyinka ku haystay oo inta badan sifiican ayey u shaqeysaa soona bandhigeyso software-ka.
»Arch saaxiibtinimo maleh»
Qaar yar oo ka mid ah isticmaaleyaasha adduunka Arch waa mid saaxiibtinimo leh, miyaad ka maqantahay aqoonta lagama maarmaanka u ah isticmaalka? Xaaladdan oo kale maahan in sheyga uusan saaxiibtinimo lahayn laakiin in aadan saaxiibtinimo la lahayn ama aadan lahayn aqoon lagama maarmaan u ah isticmaalkeeda.
Waa wax aan micno lahayn, sida haddii aad dhahdo: "747 saaxiibtinimo malaha, baaskiilkayga waan haysan doonaa", claaaaro….
Xaqiiqduna waxay tahay inay tahay wax laga xumaado in laga shaqeeyo terminal saafi ah, "
Dabcan, sababta oo ah tayadaada isticmaale ahaan dhamaadka, aniga ahaan terminalku waa daawada runtiina 85% isticmaalka mishiinkeyga waxaan ka sameeyaa Yakuake + tmux, inta soo hartay waa isticmaalka lama huraanka ah ee codsiyada garaafka ah sida daalacashada shabakadaha, xafiisyada xafiisyada , iwm
"Marka la soo koobo, Linux waa soo-jeedin muddo-dheer ah marka loo eego naqshadeynta,"
Waxaan u maleynayaa in aan sidaas u dheerayn, muuqaalka nooca ee GNU / Linux of Lightworks (xirfadle software tafatirka software) ayaa caddaynaya.
"Laakiin weli wuxuu qabaa dhibaatooyin aad u daran"
AHA !? Waa kuwee? In xilligan la joogo aysan jirin codsiyo daboolaya baahiyahaaga macnaheedu maahan inay leedahay "dhibaatooyin aad u daran", runti internetka maanta ayaa si weyn uga jira jiritaanka GNU / Linux * qufaca *
Nidaamyo aad u tiro badan, soo jeedinno badan iyo kala-qaybsanaan aan muran ku jirin.
Hubaal, waa doqon isku mid ah oo aan si joogto ah uga maqalno zombiesyadan isticmaalayay Windows sannado 😀
"Kala-jajabinta" waa in lagu beddelaa "kala-duwanaanta" waxa "hal cabbir oo dhan uusan ku habboonayn". Waxaa jira kumanaan naqshadeeyayaal ah kabo, mouse, baabuur, farshaxanno kala duwan ... maxaa kala jaban!
MAYA sayid, kala duwanaansho, kala qaybin la'aan.
Ugu dambeyntiina, Windows, MacOS, GNU / Linux, FreeBSD iyo nidaamyo kale oo badan oo kala duwan ayaa ku dhashay baahiyo kala duwan, oo diiradda la saaray adeegsiyo gaar ah qaar badan oo ka mid ahna ay billaabeen inay isku mid noqdaan.
Windows iyo MacOS iyagoo ah nidaamyo diiradda saaraya isticmaaleha ugu dambeeya bilowga isla markaana sannado badan oo suuqa ku jira marka loo eego noocyada casriga ah ee Ubuntu, Fedora ama nidaam kasta oo diyaar u ah in la isticmaalo GNU / Linux, waxay leeyihiin codsiyo badan oo dhammaystiran oo hawlo badan ah waana caqli gal ah waqtiga ay horumarinayeen, ilaa 20 sano.
Xaaladdan oo kale, waxaa kale oo xusid mudan in wixii ka dambeeya is-dhexgalka nidaamka kala duwan ee u dhexeeya Windows iyo MacOS, codsiyada hal mar u gaarka ahaa MacOS maanta ay u shaqeeyaan si isku mid ah ama ka wanaagsan Windows, kaasoo ka xayuubiyay MacOS barxadda meelihii loogu talagalay naqshadeynta heer sare . In kasta oo ay run tahay in alaabada Apple ay wali leeyihiin faa iidada dheeri ah ee isdhexgalka SW / HW iyo daryeelka gaarka ah ee muuqaalka midabka ee nidaamka oo dhan, codsiyada, aaladaha fiidiyowga iyo daabacayaasha maanta waxaad kuheleysaa natiijooyin isku mid ah adoo adeegsanaya isla barnaamijyo ku saleysan Windows-based nidaamyada - sidaas darteed Apple wuxuu joojinayaa inuu noqdo masraxa heer sare ee naqshadeeyayaasha runtiina muddo dheer wuxuu isku dayay inuu iskiis isu geliyo madal badan oo loogu talagalay dadka isticmaala dhammaan noocyada sheeganaya xasillooni ka weyn iyo waxyaabo kale oo aan macno lahayn oo ah Cidina weli ma aysan hubin fanboysyada.
Taas bedelkeeda, GNU / Linux iyo FreeBSD waxay ku dhasheen nidaam u heellan bay'ada shirkadaha ganacsiga iyo xirfadlayaasha IT-ga iyo shabakadaha, iyadoo goor dhaweyd si ballaadhan loo qaatay GNU / Linux oo laga helay kombuyuutarrada iyo laptops-yada, sidaa darteed, WAA QAADO in weli ay jiraan aagag ay ku sugan yihiin dib udhacday sida tafatirka feylka badan. Si kastaba ha noqotee, iyo iyaga oo jecel, FARSAMADDA FARSAMO EE KA DANBAYSA ISTICMAALKA ISTICMAALKA ayaa ka dhigaysa iyaga kuwo la odorosay inay yihiin beddelka kobaca ugu badan ee mustaqbalka waxaana iska cad in tani ay la socon doonto horumarinta aaladaha lagama maarmaanka u ah si loo daboolo qiimaha- baahida isticmaaleyaasheeda. Waa run GNU / Linux wali lama sinna Windows ama MacOS marka loo eego aaladaha kaladuwan, laakiin si dhakhso leh ayey ugu soo dhowaaneysaa iyo goorta naqshadeynta gudaha ee nidaamka GNU / Linux ay ugu dambeyn imaaneyso, oo lagu daray haysashada aaladaha lagama maarmaanka u ah horumarinta xirfadlayaal doorta madal waxay u dejin doontaa nidaamka penguin-ka sidii ikhtiyaarka taatiga ah marka la isticmaalayo nidaamka qalliinka.
Dhinaca kale, xasillooni darrada weligeed ah iyo godadka amniga ee Windows, ee caadiga u ah qaabeynta iyo horumarinteeda, waxay ka dhigan tahay in haddii aan si buuxda dib loo qorin - hawl titanic ah, aan macquul aheyn in lagu qabto xilli dhexdhexaad ah iyadoo loo maleynayo inaad leedahay ilo dhaqaale oo aad ku sameyso ahaanshaha nidaam qalliin dhexdhexaad ah oo adeegsadayaasheedu aysan ka warqabin oo ay hubaal ahaan u joojinayaan adeegsiga - ama ugu yaraan adeegsanayaan khadka - haddii ay wax ka ogaanayaan dhibaatooyinka ay leedahay.
Ha u oggolaan qadarintaada shakhsi ahaaneed inay kaa horjoogsato inaad aragto keynta. Waxa kale oo jira waxyaabo badan oo aniga igaga mashquuliya GNU / Linux taas oo had iyo jeer nagu dhici doonta nidaam kasta oo aan isticmaalno ilaa aynaan ku sameynin inta aan cabirno.
Marka loo eego aragtidaada, khaladku wuxuu ku jiraa isticmaalaha ee ma aha nidaamka. Cillad intee le'eg ayuu naqshadeeye ama muusikiiste u haystaa ku takhasusidda farshaxanka oo aan ku jirin kombuyuutarrada? Ugudambeyntii waxaad kudhamaaneysaa inaad kahadasho godadka amniga, serverka, codsiyada ganacsiga, iyo mowduucyada ka fog mawduuca boostada. Waxaad ku raacsan tahay kuwa neceb Linux-ka "waxaad u baahan tahay xirfadaha kombiyuutarka ee Linux." Waa hagaag maya, si aad u rakibto ubuntu waxaad dhigtaa pendrive, waxaan kuu sheegi lahaa inay ka sahlan tahay daaqadaha, maadaama aadan u baahnayn cd darawal Motherboard-ka. Terminalku wuxuu faa'iido u leeyahay kuwa garanaya, ha adeegsadaan Arch ama Gentoo. Aad ayey u fududahay in la qoro emerge -av firefox waana intaas, laakiin tan gadaasheeda waxaa jiray bilo daraasad ah, farsamooyin isku dhafan iyo maamulida calanka, oo aad uga fog aqoonta farshaxanka. Maaddaama ay had iyo jeer dhahaan "Linux saaxiibtinimo ma aha, way garaneysaa sida loo doorto saaxiibbadeeda"
Raadi waxyaabo kale oo bilaash ah oo loogu talagalay Flash Professional, Traktor (iyo darawallada wadayaasha), ama Ableton Live. Apple wuxuu leeyahay kernel aad u deggan oo aad u sarreeya, wax lala wadaago Linux. Taasi waa sababta loogu adeegsaday muddo tobanaan sano ah multimedia, maahan inay quruxsan tahay (waa hagaag, qaar uun arka FB ayaa ku iibsanaya taas: P). Waxa ka maqan Linux waa barnaamijyo, saldhiguna waa wanaagsan yahay.
Saldhiggu waa heer sare Waqti kahor waxaan aqriyay isbarbardhiga (ma ahan mid dhameystiran) inta udhaxeysa Linux iyo Darwin waana ii cadaatay in Linux uu yahay kansarka ugu horumarsan ee la heli karo. GNU / Linux waa nidaam si aan macquul aheyn loo sameeyay oo hoosta laga fiirinayo. Matalaadda garaafka ee isweydaarsiga ma jirin muddo dheer (waxaan ula jeedaa guud ahaan xisaabinta) inay ka nixiso isbeddelada lama filaanka ah.
Waa run in fursado badan ay abuuraan jahwareer waana sababta aan u arko fikradda xalalka guud inay tahay rajo ka mid ah waxaas oo dhan. Waan ugu yaraan aaminikaraa qalabkeyga, waan ogahay in hadii LibreOffice ay hirgaliso heer xun maanta (oo dhacaya) qof ayaa la imaan doona fargeeto si uu noo badbaadiyo, taas oo kiiskan uu yahay Apache OpenOffice. Waan ku kalsoonaan karaa qalabkeyga maxaa yeelay anigoo ah softiweer bilaash ah waxay helayaan firfircooni aan macquul aheyn in la joojiyo waana su'aasha aan doonayay inaan ku soo qaado boostada.
Haddii aan u aragno barnaamijyada bilaashka ah kuwa ugu waxqabadka badan dhaqanka xorta ah, markaa waxaan aragnaa in barnaamijka ay tahay inuu awood u yeesho in lala wadaago, la isticmaalo, wax laga beddelo, dib loo qaybiyo, la iibiyo iyo xorriyado kale oo aan la xaddidi karin maxaa yeelay lambarka isha ayaa jira. Xorriyadda 0 waa xorriyad la dhayalsaday waana tan aan shalay u imid.
Oo ma olol baa ku jira Desdelinux?
Olol ololaya Axadda!
Axaddu waa nasasho
Dhibaatada ugu weyn ee Inkscape waa xasillooni. Anigu waxaan ahay naqshadeeye xirfad leh iyo sawirka dulinka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadayda. Waxaan u isticmaalaa 'Inkscape' laakiin waxqabadkeedu waa mid gaabis ah oo culus oo leh shaqooyin adag. Xitaa marka la eego muuqaalka muuqaalka wuu ku fudud yahay shaqooyinka noocaas ah.
Gimp inkasta oo ay tahay mid fantastik ah, haddana wali waxaa ka dhiman "daran", feker ahaanteyduna ma ahan 14ka qaybood ama la'aanta CMYK. Hadday ahayn halkii ay ka shaqeyn lahayd. Maaha "agile" barnaamij lala shaqeeyo. Waxaa jira faahfaahin badan oo la sifeeyo (in badan baan idhaahdaa, mana doonayo inaan faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo).
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaan ku kalsoonahay in goor dhow ama ka dibba dhibaatooyinkaas la xallin doono, oo laga yaabee in muddada dhexe ama muddada fog dhammaan barnaamijyadan lagu mideyn doono nooc ka mid ah noocyada naqshadeynta halkaasoo ay ku wadaagaan waxqabad sare oo isku mid ah oo aan ka dalbanno barnaamij kasta oo xirfadle ah (tan hadda waa utopia).
Waa dhaleecayn adag, laakiin waxaan ku adkaysanayaa, waxaa dhahay mid maalin walba la shaqeeya barnaamijyadan oo iska caabiya isticmaalka Photoshop, Corel ama kuwa kale oo aan si siman u aqaano laakiin difaacaya falsafadda software-ka bilaashka ah.
Waa inaan iimaan leenahay !!!
Miyaad isku dayday "animata"? Waa wax aad u fiican oo si fudud loo isticmaali karo, waxay leedahay cilado laakiin waxay si fiican u dhammaystiraysaa shaqada animation
Kaliya waan eegay oo waxay i siinaysaa aragti wanaagsan sababtoo ah sida ugu wanaagsan ee bogga loo qabtay. Marka waxaan arkaa in kaliya loo heli karo Windows iyo Mac. Waxaa jira koodhka isha, wax waa wax. Waad ku mahadsantahay soo galinta si kasta
Aynu dhigno dhagaxa ugu horreeya ee softiweer bilaash ah maanta markaa.
Sidan ayaa qoraalku ku egyahay, waa wax aan markasta ka hadalno, barnaamijyada bilaashka ahi waxay u baahan yihiin lambar aad u tiro badan oo damiirka ka badan kombiyuutarada.
Buug-gacmeedka Raspberry Pi